nova 7i ကို Mid-range Performer လို့ ပြောရင်ကောင်းမလား
nova 7i ကို Review လုပ်ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းပြချက်ကတော့ Mid-range တန်းမှာ Powerful ဖြစ်တဲ့ SoC သုံးထားတာရယ် Quad Camera ပါတာကိုမှ ၃၆၉,၀၀၀ ဝန်းကျင်စျေးနဲ့ ဝယ်လို့ရတဲ့ အားသာချက်တွေကြောင့် သေသေချာချာလေး သုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
First Impression မှာတုန်းက Kirin 710 ဖုန်းတွေ ခြေရာချင်း ထပ်နေတဲ့ကြားက ရုန်းထွက်လာတဲ့ Rare Gem လို့ ပြောခဲ့ဖူးသလို ရတနာလို့ ပြောတာထက် Design ၊ Hardware နဲ့ Camera အတွဲက ဒီစျေး၊ ဒီတန်ဖိုးနဲ့ လိုက်ဖက်တယ်လို့ မြင်တယ်။
GMS Service မပါဝင်တာလွဲလို့ System Optimization နောက်တနည်းပြောရရင် ပေးရတဲ့စျေးနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ Performance ရတယ်ဆိုတော့ Review လေး စလိုက်ရအောင်ဗျာ။
nova 7i ataGlance
Crush Green အရောင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော် အမွမ်းတင်ဖူးတာ များနေပြီ ထင်ပါတယ်။ ခိုပြာရောင်သန်းသလို ဘဲခေါင်းစိမ်းရောင်လို စမတ်ဖုန်းတွေထဲမှာ ရှားပါးသော အရောင် ဖြစ်နေတော့ တွေ့လိုက်တာနဲ့ မျက်မှန်းတန်းမိလွယ်တဲ့ Feel ကို ရတယ်။
Crush Green Colour
တချက်တချက် အလင်းပြန်သွားရင် ညက်ညောစိုပြေနေတဲ့ nova 7i ကျောဘက် (Sexy Back) အလှက လက်ထဲကိုင်ထားရင်တောင် အရောင်ပြေးနေတဲ့ Body ကို ကြွားချင်စရာ။ ခဏခဏလည်း ပြန်ကြည့်တယ်၊ ရှုမဝ ဖြစ်မိလို့လားမသိ?
ကိုယ်တွေလိုချင်တဲ့ အရောင်ကို Review Unit ပံ့ပိုးပေးတဲ့ Huawei Myanmar ကိုလည်း ကျေးဇူးပါ။ သူ့ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ ကျောဘက် Design ကလည်း Color ကို ပိုပေါ်လွင်အောင် ထောက်ပံ့သလိုဖြစ်နေတာကြောင့် သဘောကျမိတယ်။
Grease ၊ Fingerprint Magnet
ဒီမှာပြောစရာရှိလာတာက Plastic Back ရဲ့ လက်ရာ ထင်လွယ်တဲ့အချက်ပါ။ လူတိုင်း ကိုယ့်ဖုန်းလေး ပြောင်လက်တောက်ပနေတာမျိုး သဘောကျပေမယ့် Glossy Plastic ဆိုတော့ သွားပြီလေ (သချင်ရင် အဝတ်နုနုနဲ့ မကြာခဏ ပွတ်ပေတော့)
လက်ဗွေရာဖျောက်တာ ကိုယ်တွေ အလုပ်မဟုတ်ပေမယ့် လှချင်အောင် ထိုင်သန့်နေရတော့ Annoy ဖြစ်လာတယ်။ အဲ့မှာ ဂွပ်ကျပြီ ၃ သိန်းဝန်းကျင်ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် Gorilla Glass Coating မပါဘူးလေ။
ပါခဲ့ရင်တောင် မော်ဒယ်အနိမ့်ပဲ ဖြစ်မှာဆိုတော့ ပွတ်ရင်းပွတ်ရင်းရှ အဲယောင်လို့ ခြစ်ရာ ၊ စင်းရာ ထင်လွယ်မယ်လို့ တမင်နောက်ပြောတာပါ။ အဲ့သလို မလုပ်ချင်ရင် အကြည်ရောင် Silicon Cover ပြေးတပ်လို့ ညွန်းချင်ပါတယ်။
ကိုင်ရတာလေးတဲ့ထဲတော့ မပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Body က Minimalist ဒီဇိုင်းမဟုတ်တဲ့အတွက် ပွယောင်းယောင်းနိုင်တဲ့ ခံစားချက်မျိုးဆိုဖြစ်ပြီးတော့ ကိုင်ရတာ သိပ် Smart မဖြစ်ဘူး။ နောက်ပြီး SD Card Support ပါပေမယ့် သူ့မှာသုံးနိုင်မှာက Nano Memory Card မို့ သုံးနေကျ Micro SD Card တွေနဲ့အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်။
ဒါပေမယ့် 128GB Storage ဆိုတာကလည်း တော်ရုံ Usage အတွက်တော့ လုံလောက်တာထက် ပိုတဲ့ပမာဏပါ။ ဆိုတော့ အမြင်အားဖြင့်ကြွေသလောက် ကိုင်သုံးတဲ့အခါ သိပ်ဘဝင်မကျတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်။
6.4”Screen က ဘာဆိုးလို့လဲ? HUAWEI အကြိုက် LTPS (Low Temperature Poly-silicon) Panel ကိုပဲ ဆက်သုံးထားတယ်။ ဒါက ဘာကောင်းလဲဆိုရင် IPS ချင်းအတူတူဆိုရင်တောင် LTPS IPS Panel က ပါဝါစား ပိုသက်သာပါတယ်။
1080 x 2340 Resolution က သာမန် FullHD ထက် မဆိုစလောက်လေး Pixel Count ပိုများတယ်ဆိုတော့ HD+ Resolution ထက် ပိုကောင်းသလို Video ၊ Gaming အတွက် ကွက်တိ အနေထားလေးပဲ။
Selfie Camera ကို Display ရဲ့ ဘယ်ဘက်ထောင့်မှာ ထည့်ပေးထားပြီး လုံးဝ Full Screen Gaming Experience တော့ မရဘူး။
ရိုးရိုးဖုန်းသုံး ဘာညာအတွက် nova 7i Display က အဆင်ပြေတယ်။ သို့ပေမယ့် Media Consumption နဲ့ Game ဆော့ချိန်မျိုးမှာ Optimize မဖြစ်ဘူး။
ဖြူဖတ်ဖြူရော်နိုင်ပြီး ရုပ်ထွက်အရမ်းမကောင်းဘူးလို့ ခံစားမိတယ်။ ဒါက LCD Display ချင်းယှဉ်မယ်ဆိုတောင် သိသာနေတာမို့ ထည့်ပြောရတာပါ။
Display Setting မှာ Vivid ထားသုံးတာတောင် လိုချင်တဲ့အခြေအနေမရောက်ခဲ့တာမို့ ဖုန်း Display နဲ့ပတ်သက်ပြီး အရသာခံတတ်သူတွေအတွက် nova 7i ကို ညွှန်းဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ်။
ခုချိန်ထိ Fingerprint ကို ဘေးဘောင် Power Button မှာ ထည့်တဲ့နည်းဟာ ကိုယ်တွေအကြိုက်ဆုံး ဖြစ်နေသေးသလို လက်ရှိအချိန်ထိ သုံးဖူးသမျှ Side-mounted တွေထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးလို့ ပြောချင်တယ်။
လက်ကို Scan လုပ်ဖို့ထားတဲ့ သူ့ရဲ့နေရာနဲနဲလေးမှာ ကိုယ့် လက်ဗွေကို ယူတဲ့ပုံစံက စနစ်ကျတယ်။ လက်ရဲ့နေရာအတော်များများကို Data ရအောင်ယူသလို လက်ဗွေမရသေးတဲ့နေရာတွေကိုလည်း သေချာပြပေးတယ်။
အဲဒါကြောင့် 360° ဘယ်လိုအနေအထားမဆို Failure Rate မရှိသလောက်နဲပြီး Unlock Speed မြန်လို့ စိတ်ချမ်းသာမိတယ်။
နောက်ပြီး ဖုန်းကို ကိုင်ထားတဲ့အခါ လက်က Fingerprint ပေါ်ရောက်နေရင် Auto ဖွင့်ပြီးသားဖြစ်မနေအောင် လက်တင်ရုံနဲ့ Scan လုပ်မလား၊ Power Button နှိပ်မှ Scan မလားဆိုတာပါ ရွေးခွင့်ပေးထားတာက ပြည့်စုံတဲ့ Experience တစ်ခုလို့ ကိုယ်တွေတော့ ယူဆတယ်။
Mono Speaker အကြောင်း ပြောကြတာပေါ့။ Damn!!!! ထင်ထားတာထက် အများကြီးပိုကောင်းတဲ့ Speaker.. ကျယ်တယ်၊ ကြည်တယ်။ အထူးသဖြင့် Mid-range မှာ Bass သံ ခံစားရလောက်တဲ့ Speaker မျိုး မကြုံရတာ အတော်ကြာပြီ။
Personal Feeling အရ နဲနဲချေးများရရင်တော့ Vocal တွေကို သိပ်သဘောမကျချင်ဘူး။ နဲနဲစူးတဲ့ဘက်ရောက်တယ်ထင်လို့။ ဒါတောင် သူ့ရဲ့ Overall Speaker နဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် ရှာကြံအပြစ်ရှာထားတယ်လို့တောင် ပြောနိုင်လောက်အောင် မိုက်ပါတယ်။
Speaker နည်းတူ နားကြပ်တပ်ပြီး နားထောင်ရင်လည်း Audio Quality က အတော့်ကိုကောင်းတဲ့ အနေအထားမှာရှိတယ်။ HUAWEI ရဲ့ Histen Sound Effect ပါပေမယ့် အဲဒီမှာ နားကြပ်အမျိုးအစားရွေးတာနဲ့ Sound Mode ၄ ခုကလွဲရင် ကလိစရာဘာမှမပါ။
Music ပိုင်းမှာတော့ Volume 60-70% လောက် ထားမှအနေတော်ဖြစ်တာရယ်၊ Sound Stage များလာတဲ့အခါ အသံနဲနဲ လုံးချင်တာရယ်ကလွဲရင် နားထောင်ရအတော်မိုက်တယ်။ ကိုယ့် Experience အရ သူ့ Sound Quality ကိုပြောရရင် Bass>Mids>Highs ပါ။
Audio ပိုင်း အသားပေးရွေးမယ့်သူတစ်ယောက်အတွက်ဆိုရင် nova 7i က ဒီ Level မှာ ရွေးချယ်စရာအကောင်းဆုံးဖုန်းတစ်လုံးတောင် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
Haptic အနေနဲ့ဆိုရင် Nova 7i က Soft ဖြစ်တဲ့ဘက်ရောက်တယ်။ စာရိုက်တဲ့အခါ Keyboard ရဲ့ Feedback အရ မဆိုးပေမယ့် ဖုန်းလာဘာညာ Vibrate ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ ပျော့လွန်းတယ်လို့ ခံစားမိ။ ပြောရရင် Mixed Feeling ပေါ့။
Google Service & EMUI
အရင်ဆုံးသိထားရမှာက nova 7i ဟာ Google Service ကို Official Support တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးတော့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါ။ ခုမှ အစပျိုးခါစ Huawei ရဲ့ Mobile Service မှာလည်း လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါသေးတယ်။
အထူးသဖြင့် App မစုံလင်သေးတာကြောင့် 3rd Party Store တွေကို အားကိုးနေရသလို Map, YouTube တို့လို Google App တွေအသုံးများတဲ့သူတွေအတွက် အခက်တွေ့နိုင်တယ်။HUAWEI အနေနဲ့လည်း ဒီအချက်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေတစ်ခုကို မကြာခင်ပေးစွမ်းနိုင်မယ်လို့လည်း ယုံကြည်မိပါတယ်။
ဆိုတော့ UI ပိုင်းကို ဆက်တာပေါ့။ အမြင်အားဖြင့်ပြောရရင် EMUI ဟာ အတော့်ကို ရိုးရှင်းတဲ့ UI ပါ။ Icon တွေကအစ Setting ပိုင်းအဆုံး Simple ဖြစ်သလို သပ်ရပ်တယ်။ နောက်ပြီး Animation အပိုင်းမှာ အရင် Version တွေကထက် ပို Smooth တယ်။
တစ်ချို့နေရာတွေမှာဆို iOS နီးနီး Buttery Optimize ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ Feel မျိုးတောင် ရတယ်။ ဒါကတော့ ကိုယ့် Personal Feeling သက်သက်ပါ။ EMUI ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးအချက်ကိုပြောပါဆိုရင် သူ့ RAM Management လို့ပဲ ထောက်ပြချင်တယ်။
သူ့ရဲ့ RAM Management လုပ်ပုံက App တွေကို Background မှာ အကုန် Run ခိုင်းတာထက် ဂိမ်းတွေမှာ Save File လုပ်ထားတာနဲ့ပိုတူတယ်။ ဆိုလိုတာက ကိုယ်သုံးလက်စ App တစ်ခုကနေ ထွက်လိုက်တဲ့အခါ နောက်ကွယ်မှာ တောက်လျှောက် Run နေတာမဟုတ်ပဲ အဲဒီ App ကို ပြန်ဝင်လိုက်တော့မှာ ရောက်လက်စ Check Point နေရာကို Loading လုပ်ပေးတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့။
(တစ်ချို့ကတော့ ဒါကို App Freeze လို့လည်း ခေါ်ကြတယ်။) သူ့ရဲ့အားသာချက်က App တစ်ခုလုံးထားတာမဟုတ်ပဲ Save File ပုံစံ ချုံ့ထားတာမို့ RAM စားနှုန်းသက်သာသလို Background မှာ တစ်ချိန်လုံးပွင့်နေတာမဟုတ်လို့ Battery စားနှုန်း ပိုသက်သာစေတာပါ။
အားနည်းချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ Background မှာ တောက်လျှောက် မ Run နေလို့ Download ဆွဲထားတာမျိုးတွေဆို အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကြာရင် Pause ဖြစ်သွားတာမျိုး ကြုံရတတ်တယ်။ အဲလိုမဖြစ်စေချင်ရင်လည်း ကိုယ် ဆက်တိုက် Run စေချင်တဲ့ App တွေကို Setting ကနေ စိတ်ကြိုက်သွားဖွင့်ပေးထားတယ်။
ကိုယ်တွေစမ်းတုန်းကဆို မနေ့က PUBG ဆော့ရင်း ပွဲအပြီးမှာ မေ့ပြီးဖွင့်ထားခဲ့တဲ့နေရာတိုင်း နောက်တစ်နေ့ပြန်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါ ရှိနေသေးတဲ့ အတွေ့အကြုံဟာ တော်ရုံ Android Phone တွေပေါ်မှာ တွေ့ရခဲတဲ့ Experience ကောင်းလို့တောင် ဆိုချင်တယ်။
ဒီလို သဘောကျတဲ့အချက်တွေရှိနေပေမယ့် တစ်ချို့နေရာလေးတွေမှာလည်း UI ရဲ့ လိုအပ်ချက်လေးတွေကို တွေ့နေရပါသေးတယ်။ သူ့ရဲ့ Setting ပိုင်းက ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ထားလို့ ရှင်းလင်းနေတဲ့အခန်းမျိုးနဲ့တူပေမယ့် ဗီဒိုဖွင့်လိုက်မှ အဝတ်တွေ ပုံပြီးထွက်ကျလာတာမျိုးနဲ့ဆင်တယ်။
ဥပမာပြောရရင် Navigation Gesture လို Feature မျိုးကို System & Update ဆိုတဲ့ Tab ထဲ သွားထည့်ထားသလိုမျိုးပေါ့။ နောက်ပြီး Setting တစ်ခုဝင်လိုက်တိုင်း Recent မှာ Tab တစ်ခုစီ သွားသွားပွင့်နေတာကို ဘဝင်မကျဘူး။ ပထမဆုံး Setting တွေလိုက်ကြည့်တုန်းကဆို Tab တွေပွင့်ကျန်ခဲ့တာ မနဲမနောပဲ။
နောက်ဆုံး နဲနဲချေးများရရင် Feature သိပ်မစုံဘူးလို့ ခံစားရတာ၊ Animation တွေက တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာ Consistent မဖြစ်တာ (ဥပမာ Home Screen Animation က မိုက်သလောက် Noti Bar နဲ့ Setting လိုနေရာတွေမှာ ဒုံးတိဖြစ်နေတာမျိုး) အဲလိုအချက်တစ်ချို့ရှိနေသေးပေမယ့် သူ့ရဲ့ Overall Experience ကြောင့် ကိုယ်တွေအကြိုက်ဆုံး UI တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုရမှာပါ။
Benchmark တွေအရ Kirin 810 ရဲ့ Performance က Snapdragon 730G, Mediatek ရဲ့ Helio G90T တို့ Level နီးနီးမှာရှိတဲ့ SoC ပါ။ ဆိုတော့ Daily Usage လောက်အတွက် ပြောဖို့လိုမယ်မထင်။ Gaming မှာတော့ PUBG ကို HD, High Setting အမြင့်ဆုံးပေးထားပြီး Balance ကို Ultra နဲ့ဆော့ရင်တော့ 40fps ဝန်းကျင်ထိ ဆော့နိုင်မယ်။
Frame Drop ဖြစ်တာ၊ ထစ်တာမျိုး လုံးဝမကြုံခဲ့ရသလို 1hr PUBG ဆော့အပြီးမှာ ဖုန်းနောက်ဘက်က နွေးရုံလောက်ပဲ ခံစားရတာမို့ Game ဆော့ဖို့အဆင်ပြေတဲ့ Mid-range SoC တစ်ခုဆိုတာကတော့ သေချာပါတယ်။
မျှော်လင့်မထားပဲ အားရဖို့ကောင်းနေတာက Nova 7i ရဲ့ Battery Life ပါ။ အားအပြည့်က စသုံးပြီး 10% လောက်ပဲကျန်ချိန်မှာ သူ့ရဲ့ Screen TIme က 9hr နီးနီးရှိပြီး အဲဒီထဲမှာ PUBG ဆော့ချိန်က ၃နာရီနီးပါးရှိတယ်။ အားအရဆုံးက သူ့ရဲ့ Stand-by Time ပါ။
သူ့ထက် Battery Capacity များတဲ့ဖုန်းတွေထက်ကို သူ့ Stand-by Battery Drain က နဲတာကို သတိထားမိတယ်။ Battery Life နည်းတူ သူ့ရဲ့ 40W Charging Speed ကလည်း သဘောကျစရာ။
10% က စသွင်းတာ 30min မှာ 70% နဲ့ 1hr မှာ 100% ပြည့်တယ်။ ဆိုတော့ Performance ကောင်းပြီး Battery ခံတာကို ကြိုက်တတ်ရင် Huawei ရဲ့ Nova 7i က ပထမဦးစားပေးအဖြစ် ညွှန်းနိုင်မယ်လို့ ကိုယ်တွေတော့ ယူဆတယ်။
48MP အပါအဝင် Camera ၄ လုံးထည့်ပေးထားတဲ့ Nova 7i က Mid-range မှာ အမြင်အားဖြင့်မဆိုးဘူးပေါ့။ နောက်ပြီး Camera Interface အရလည်း Huawei ထုံးစံအတိုင်း Feature စုံတယ်။ တစ်ခုထဲသော Complaint တက်ချင်တာလေးက ခုထိ HDR Mode ကို More Setting ထဲ သွားသုံးနေရတာပါ။ 2020 လို ဒီဘက်ခေတ်မှာ HDR Auto on/off တဲ့ Feature လေးတော့ ထည့်ပေးသင့်ပြီထင်တာပဲ။
Indoor Shoot with HDR
Image Quality အကြောင်းပြောရရင် နေ့ခင်းရိုက်တဲ့ပုံတွေမှာ အလင်းကောင်းသရွေ့ Detail ကောင်းသလို Color ကလည်း Natural ဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီးသူ့မှာ 48MP ကိုမှ AI အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ Mode သီးသန့်ပါတာဆိုတော့ အဆင်ပြေတယ်။
Low light Photography with HDR
မပြေတာက Low Light ပါ။ နေဝင်ပြီးအလင်းနဲလာတာနဲ့ သူ့ Photo တွေက Color တွေ Washed out ဖြစ်ပြီး ဖြူဖတ်ဖြူလျော်ပုံတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။ Night Photo တွေမှာဆို အထူးသဖြင့် ကောင်းကင်နေရာတွေမှာ Noise အရမ်းများတယ်။
အဲဒီအတွက် ဖြစ်နိုင်ရင် Night Mode သုံးဖို့ အကြံပေးချင်တယ်။ Night Mode သုံးရင်တော့ ပုံတစ်ပုံရဖို့6sec လောက်စောင့်ရတယ်။ အစပိုင်းမှာ လက်နဲနဲငြိမ်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ရလာတဲ့ပုံတွေက Auto Mode ထက်အများကြီးပိုအဆင်ပြေသလို Detail, Exposure တွေပါ ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ စိတ်မကောင်းစရာက Night Mode မှာ 1x နဲ့ 2x ကလွဲရင် Ultra-wide ဘာညာအတွက် သုံးခွင့်ပေးမထားတာပါ။
Ultra-wide ဆိုမှ သူ့ရဲ့ 8MP Ultra-wide က အလင်းကောင်းရင် ပုံထွက်မဆိုးပေမယ့် Main Camera လောက်တော့ Detail မကျန်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ Ultra-wide ပုံတွေကို HDR Mode နဲ့ ရိုက်စေချင်ပါတယ်။
2MP Macro Photo ကတော့ အလင်းအရမ်းကောင်းမှအဆင်ပြေသလို လက်လည်းအတော်ငြိမ်ရတာမို့ ထင်သလောက်အသုံးမတည့်ဘူး။ 2MP နဲ့ Depth ဖမ်းတဲ့ Portrait ကတော့ Edge Detection မဆိုးပေမယ့် မျက်နှာကို Auto Detect လုပ်ပြီး ချောပစ်တတ်တာလေး တစ်ချက်တော့ ရှိတယ်။
16MP Selfie Camera က အလင်းကောင်းရင်တော့ မဆိုးဘူး။ နောက်ပြီး Selfie Photo တွေ Edit ရင် အဆင်ပြေအောင်ထည့်ပေးထားတဲ့ Beauty Mode ကလည်း သုံးရလွယ်ပြီး Feature စုံတာဆိုတော့ Selfie အရိုက်များတဲ့သူတွေ သဘောကျလောက်မယ်။
Video ပိုင်းမှာတော့ နောက်ဘက် 1080p, ရှေ့ဘက် 1080p Maximum ပါ။ အဲဒီ 1080p မှာကို Stabilization က ဝိနေပါသေးတယ်။ ဆိုတော့ အပေါ်ကအချက်တွေ Recall ပြန်လုပ်ရင် Manual Control နဲ့ Light Painting ဘာညာ Feature စုံချင်ရင်တော့ nova 7i က သဘောကျချင်စရာပေမယ့် Point & Shoot သမားတွေ၊ Video အရိုက်များတဲ့သူတွေအတွက် ညွှန်းဖို့ဆိုရင် ခက်ပါလိမ့်မယ်။
အနှစ်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင် အရင် Huawei Mid-range တွေထက် အဘက်ဘက်က တိုးတက်မှုတွေမြင်လာရတဲ့ဖုန်းပါ။
Body, Display, Camera ပိုင်းလို ဝိတ်လျှော့မှုတစ်ချို့ကို လက်တွေ့သုံးတဲ့အခါ ကြုံခဲ့ရပေမယ့် Kirin 810 လို Performance ကောင်းတဲ့ SoC အပြင် သူ့ရဲ့ Design, Battery, Sound Quality နဲ့ Fingerprint တို့လို Hardware ပိုင်းတွေကလည်း သုံးရတဲ့သူကို စိတ်ချမ်းသာမှု ကောင်းကောင်းပေးနိုင်နေတယ်။
နောက်ပြီး EMUI လို ရိုးရှင်းပြီး Optimization ကောင်းတဲ့ UI မျိုးမှာ Google Service ထည့်သုံးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလည်း ရှိနေပြီမို့ တကယ်လို့ ကိုယ်က Camera မှ Camera, AMOLED မှ AMOLED ဆိုတဲ့သူမဟုတ်ရင်တော့ ၄ သိန်းအောက်ဆိုတဲ့ဈေးတန်းတစ်ခုမှာ nova 7i ကို ညွှန်းကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်။
nova 7i Feature highlight
HUAWEI Mobile Services (HMS) အကြောင်း သိကောင်းစရာ